नेपालगञ्ज : नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाले स्थानीय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । नगर प्रमुख डा. धवलशम्शेर राणा, उपप्रमुख उमा थापा मगर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमवहादुर खड्काले शुक्रबार कार्य सञ्चालन केन्द्रको उद्घाटन गर्नुभयो ।
स्थानीय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि विपद व्यवस्थापनका थप सहयोग पुग्ने नगर प्रमुख डा. राणाले बताउनुभयो । केन्द्र सञ्चालनका लागि जिआईजेडले आवश्यक सामग्री सहयोग गरेको छ । उपप्रमुख मगरले नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकामा आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र सञ्चालन भएपनि विभिन्नखालका विपदसँग जुध्न सहयोग मिल्ने बताउनुभयो ।
शुक्रबार नै नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधी, कर्मचारी लगायतलाई लक्षित गरी अभिमुखिकरण गरिएको छ ।